လိုင်း DUTY ရာသီခြောက်: ဖြန့်ချိသည့်နေ့စွဲအတည်ပြုခဲ့သည်နှင့်ငါတို့သိအရာအားလုံး - သတင်း
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Line of Duty ၏ရာသီခြောက်အတွက်စတင်ရက်စွဲရှိသည်။
အဆင်သင့်လုပ်ပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Line6Duty ရာသီခြောက်ခုသည်သင်ထင်သည်ထက်စော။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်သားပြင်သို့လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့တစ်သက်တာနဲ့တူတဲ့အရာပြီးနောက်, ဖြစ်စဉ်သစ်ကိုမတ်လ၌လာမယ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အတိအကျရက်စွဲအလွန်မကြာမီကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ကျနော်တို့အတိအကျဖြစ်ဖို့နှစ်နှစ်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြရတယ်, ဒါကြောင့်ငါနောက်တဖန်တစ်ခုခုခံစားရရန်နောက်ကျောကိုပြန်ကျောတစ်ခုတည်းရာသီပြန်သုံးသပ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်ရှိရာအမှတ်တယ်။ ဒီနေရာမှာမင်းသိထားသင့်တဲ့အရာအားလုံးပါပါတယ်။
ယခုရာသီသည် AC-12 ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုမဖြေရှင်းနိုင်သောလူသတ်မှုနှင့် ပတ်သတ်၍ အာရုံစိုက်မည်ကိုယခုအချိန်အထိသိရှိရပါသည်။ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခု၏အနှစ်ချုပ် IMDb အရသိရသည် , ဖတ်: မဖြေရှင်းနိုင်လူသတ်မှုအပေါ်တစ် ဦး SIO အဖြစ်, DCI ဂျိုအန်းဒေးဗစ်ဆန်ရဲ့ပုံမှန်မဟုတ်သောအမူအကျင့် AC-12 မှာသံသယပေါ်ပေါက်။ ထို့အပြင်ဖြေဆိုရန်လိုအပ်သောအဖြေမရသေးသောမေးခွန်းများစွာရှိပါသည်။ Cottan ရဲ့သေလုနီးပါးကြေငြာချက်ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ အလျင်အမြန်ချိတ်ကိုပိတ်ထားပါသလား စောင့်ပါ၊ Lee Lee အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြလား။ ရဲအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းရန်ထိုဂိုဏ်းအဖွဲ့ဝင်သင်တန်းတက်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်သည်မဟုတ်လော။ ပြီးတော့ငရဲထဲမှာဒုတိယမြောက် H ကဘယ်သူလဲ ???
ဆဌမရာသီပြပွဲရဲ့ပုံမှန် AC-12 အရာရှိများ, အလျင်အမြန်, Fleming ကနှင့် Arnott အဖြစ် Adrian Dunbar, Vicky McClure နှင့် Martin Compston ၏ပြန်လာမြင်လိမ့်မည်။
Kelly Macdonald၊ Shalom Brune-Franklin နှင့် Andi Osho တို့၏ပြပွဲများတွင်လည်းပြသထားသည်။ ကယ်လီ Macdonald ၏သင်တန်း, တစ် ဦး ကွေးကြေးနီသူ DCI ဂျိုအန်း Davidson, ပါဝင်သည်။ သူမသည် AC-12 တွင်သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသောမဖြေရှင်းနိုင်သောလူသတ်မှု၏အကြီးတန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိဖြစ်သည်။ Shalom Brune-Franklin သည် DC Chloe Bishop အဖြစ်ပါ ၀ င်သည်၊ ဘီဘီဘီက Andi Osho ၏အခန်းကဏ္ over နှင့် ပတ်သက်၍ လျှို့ဝှက်ထားသည်။
Kelly Macdonald ကို DCI Joanne Davidson, BBC မှတစ်ဆင့်
Line of Duty ရာသီ (၆) ရက်ကိုယခုလအတွင်းလွှတ်ပေးမည်
IMDb အရသိရသည် ဘီဘီစီ One တွင်ဖြစ်စဉ်အသစ်များစတင်ထုတ်လွှင့်မည် မတ်လ ၂၁ ရက်။ ဖြစ်စဉ် (၇) ခု၊ တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘီဘီစီကယခုလအစောပိုင်းခြောက်လကျော်တွင်ဇာတ်လမ်းတွဲခုနစ်ခုရှိမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
နားထောင်ကြလော့၊ gaffer ကထပ်မံတောင်းသောအခါ၊
#LineOfDuty စီးရီး6အပိုဇာတ်လမ်းတွဲ (အစား7အစား 6) နှင့်အတူပြန်လာသည်။ မကြာမီလာမည် @BBCOne နှင့် @BBCiPlayer ။ pic.twitter.com/6An7jywJI1
- ဘီဘီစီသတင်းဌာန (@bbcpress) ဖေဖော်ဝါရီလ 2, 2021
ထို့အပြင် Duty Line ၏ဖန်တီးသူ Jed Mercurio သည်ရာသီဥတုခြောက်လပြီးနောက်စီးရီးတွင်ပိုမိုများပြားသောဘဝရှိသည်ဟုအရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဂျေး Rayner ရဲ့အပေါ်စကားပြောသော နေ့လည်စာစားရန် Podcast, သူကပြောသည်: ငါတကယ်ကလိုင်း Duty နှင့်အတူဆက်လက်ချင်တယ်။ ငါရာသီခြောက်ကျွန်တော်တို့ကိုဖုံးလွှမ်းရန်နေဆဲအဘို့အရာအများကြီးပိုရှိကွောငျးထေူ၏ထင်ပါတယ်။
ဘီဘီစီမှထုတ်လွှင့်သည့်ရက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီး၊ မတ်လ ၂၁ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့အတွက်ဘုရားသခင့်မယ်တော်… Mate ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုတင်ခဲ့သည်။
Mate မတ်လ ၂၁ ရက်၊ မတ်လ ၉ ရက်၊ #LineOfDuty သို့ပြန်သွားသည် @BBCOne & @BBCiPlayer ! pic.twitter.com/YUzzx2783v
- Duty Line (@Line_of_duty) ဖေဖော်ဝါရီလ 27, 2021
• အကယ်၍ The Fall ကိုနှစ်သက်ပါကသင်သည်ဤပြင်းထန်သောရာဇ ၀ တ်မှုရှစ်ခုကိုနောက်မှကြည့်ရှုသင့်သည်
• Duty and Bodyguard ဒါရိုက်တာတစ် ဦး သည်သဘာဝလွန်သည်းထိတ်ရင်ဖိုအသစ်တစ်ခု 'The Rig' ကိုဖန်တီးနေသည်။